Ubizo olukhuthaza inxaxheba kubarhafi - HeraldLIVE
The Algoa Sun Ubizo olukhuthaza inxaxheba kubarhafi January 25, 2014
“Eyonanto yandenza ndakhetha lomsebenzi luthando lokunceda abantu. Ndilala ndincumile maxa onke xandithe ndafundisa uluntu ngokubaluleka kwentlawulo yerhafu. Ndidibana nabantu abaninzi abohlukileyo kulomsebenzi,” utshilo.
“Enye into eyandenza ndakhetha lomsebenzi kukufuna umsebenzi onesidima, ulwazi kunye nomceli-mngeni.”
“Ndisebenza kwiphondo lonke apho ndihamba ndisenza ii-workshops ndifundisa abantu ngomcimbi werhafu,” utshilo.
“Ndenze ii-diploma ezimbini,” utshilo.
“Ndakhula ndinqwenela ukuba ngumsasazi wezemidlalo ngenxa yongasekhoyo u-Makhosandile Ndzishe owayesaya kuba ngumsasazi wezemidlalo kwi Radio Xhosa.
“Ubom abululanga, kufuneka umntu anyamezele.
“Imfundo nokuzimisela kwinto oyenzayo zezona zinto zibalulekileyo xa ufuna uphumelela ebomini. Zihloniphe, kunye nabo bakungqungileyo, ingakumbi abantu abadala.”